China Polymer Polyol LHS-100 ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya Longhua
Nkewa dị ka aha ngwaahịa
Polymer polyol LHS-100 nwere ọdịnaya siri ike 45% kemịkal polymeric polyol. A na-emepụta ya site na polyols polyether dị elu, styrene, acrylonitrile wdg.
LHS-100 nwere ihe kwụsiri ike, dị mfe iji rụọ ọrụ, na-eme mgbanwe na usoro dị iche iche.
LHS-100 bụ ngwaahịa viscosity dị ala, anaghị aghọ viscous mgbe agbakwunyere mmiri ma kpalie ya.
Isi ísì ọma
1.The siri ike ọdịnaya ọnọdụ uru bụ (50 ± 2)%, na ụfụfụ ngwaahịa nwere magburu onwe tensile na tearing arụmọrụ n'okpuru premise nke ma ekweghị ekwe; ngwaahịa ụfụfụ adịghị emebi emebi ma gbanwee agba mgbe emechara ya ọkụ na 220 ℃ maka 1 min.
2.The ngwaahịa bụ anụ na nwere ezi operability, nke nwere ike belata ego nke silicone mmanụ kwukwara na usoro
3.The ngwaahịa nwere ala viscosity na anaghị aghọ viscous na kọntaktị na mmiri. Ngwaahịa ụfụfụ nwere pores dị mma na edo edo, gradients dị ala na elu na ala, yana akpụkpọ ahụ dị gịrịgịrị.
4. Agba nke ngwaahịa ụfụfụ na -acha ezigbo ọcha, na mgbe agbakwunyere agba nwere agba, enwere ike melite ịdị ọhụrụ nke ogbo.
Ngwaahịa 5.Fam nwere VOC dị ala nke ukwuu, nke na-emezu ihe achọrọ dị ala nke sponge dị elu.
Polymer anyị ngwaahịana -arụ ọrụ nke ọma ma chọọ obere mgbanwe nke usoro ụfụfụ, nke bu uru maka nnukwu mmepụta ụfụfụ ụfụfụ; Ngwaahịa 'viscosity bụ dị ala na donọ t ghọọ viscous mgbe agbakwunyere mmiri na n'oge na -akpali akpali, nke na -eme ka ihe ndị ahụ gwakọtara ọnụ, si otú a mee usoro ikpeazụ’ mkpụrụ ndụ sponge bụ edo edo ma dịkwa mma, grajentị njupụta dị ala; Tya ngwaahịa ọdịdị bụ ọcha dị ọcha yana yana VOC dị ala, nke na-emezu ihe achọrọ nke ahịa arịa ụlọ dị elu.
A na-eji polymer polyol LHS-100 yana polyols nkịtị, dị ka LEP-5631D, LEP-335D iji mepụta ụfụfụ polyurethane na-agbanwe agbanwe, dị ka: ụfụfụ akpụ, sponge, oche, oche, matarasị, arịa ụlọ, akwa akwa, ihe akwa, ihe akpụkpọ ụkwụ, Ala kapeeti, ihe nkwakọ ngwaahịa na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
Nke gara aga: Polymer Polyol LHS-50
Osote: Polymer Polyol LHS-200
Ngwa na Polymeric Polyol